मजदुरी गरेर हुर्काएको छोराकाे ह’त्या , उजाडियो आमाको सपना ! – Life Nepali
मजदुरी गरेर हुर्काएको छोराकाे ह’त्या , उजाडियो आमाको सपना !
गोविन्द बिक नौ वर्षका थिए । उनका बुवा बिते । आमा कलावती बिकले तीन छोरा र एक छोरीलाई मजदुरी गरेर हुकाईन । तीन दाजुभाईमा उनी माहिला थिए । उनीभन्दा अगाडि एक दिदी र दाई थिए । पछाडि दुई भाई । सुकुम्बासी परिवार । सहारा केही थिएन । बुवा बितेपछि परिवारको पालनपोषणको अभिभारा आमा कलावतीको काँधमा आयो । खेतीका लागि जमीन थिएन । ***यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
पुनर्वासको क गाउँमा रहेको बागेश्वरीमा माविबाट एसएलसी पास गरे । र थप पढाईका लागि उनकी आमा कलावतीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भर्ना गरिन । धनगढी डेरा गरेर पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन । तर पनि छोरालाई पढाएर ठूलो बनाउने सपना पुरा गर्न उनले रातदिन मजदुरी गरिन । तीन वर्षअघि आमा कलावतीको सपना पुरा भयो । *** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous १० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । नसोच्ने गरी घट्यो घडेरीको मूल्य !
Next नेपालमा सोचेभन्दा भयावह बन्दै कोरोना ! आज एकैदिन देखिए यतिधेरै संक्रमित !